भारती संसदमा मणिशंकरले नेपालीको बोलि बोले: अनि भने नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदीले गरे | Canadian Reporters
भारती संसदमा मणिशंकरले नेपालीको बोलि बोले: अनि भने नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदीले गरे
Posted on December 7, 2015 , updated on December 7, 2015 by क्यानेडियन रिपोटर्स
बिदेशमन्त्रीज्यूले बिहीवार संसदमा टेवल गरेको बक्तब्यमा धेरैठाउँमा नेपाललाई ‘सुझाव’ दिएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । यस्तो सुझाव लिने कि नलिने भन्ने अधिकार सुझाव दिइने पक्ष (नेपाल)सँग हुन्छ ।
हाम्रो सवैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम त्यतिबेला जब हामीले त्यो ‘सुझाव’लाई ‘आदेश’मा बदलिदियौं । तपाईले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र संविधानसभालाई मेरो सुझाव मान्नैपर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्नुहुन्न ।
नेपालको तराई क्षेत्रबाट ११६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्हरु छन् जसमध्ये १०५ जनाले नयाँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन् । तराईबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भन्दा के हामीले बढि तराईबासीको भावना बुझ्नसक्छौं ?
तराईबाट निर्वाचितमध्ये जम्मा ११ जना सभासद् नयाँ संविधानको बिपक्षमा छन् । हामीलाई यति ज्ञान हुनुपर्छकी हामीले कसलाई समर्थन गर्ने, कसलाई नगर्ने ?
अहिले दिल्लीमा चार जना मधेसी नेताहरु आउनुभएको छ, उहाँहरुमध्ये तीन जना त चुनावमा हार्नुभएको छ । कतिले दुई-दुईवटा क्षेत्रबाट पनि हार्नुभएको छ । त्यसो भए तराईबासी नेपालीको जनमतको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ?
के हामीले तराई मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका जनतालाई कसको पक्षमा भोट गर्ने भन्ने बिषयमा पनि सुझाव दिने हैसियत राख्छौं र ?
यो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले बिशेष दूत पठायो । तर, एक नेपाली लेखकको टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने उनले त्यहाँ यस्तो ब्यबहार गरे ता कि उनी भगवान नै हुन् । आखिर किन उनले त्यस्तो गरे ? के प्रधानमन्त्रीले उनलाई त्यसैगरी नेपाली नेताहरुलाई दुब्र्यबहार गर्न निर्देशन दिएका थिए ? उनले के प्राप्त गरे त्यो गलत ब्यबहारबाट ?
हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?
हामीले २६ नोभेम्बर १९४९ मा प्राप्त गरेको संविधानबारे गत महिना छलफल गर्‍यौं, के हामीले कोही ननिम्त्याइएको बिदेशीले आएर भोली संविधान जारी नगर भनेको मान्थ्यौं त ? ठिक यस्तै घटना भयो नेपालमा । नेपालले सात बर्ष लामो संर्घषपछि संबिधान जारी गर्‍यो, राष्ट्रिय सहमतिका साथ । हामीले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिलाई किन अबमूल्यन गर्ने ?
हामीले हाम्रो संविधान १२२ पटक संशोधन गर्न सक्छौं भने नेपाललाई किन विश्वास नगर्ने कि, उनीहरुले संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसोधन गरेर असन्तोषको माग पुरा गर्नेछन् । संविधान घोषणापछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएको छ र सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । संविधानका बिषयमा केही मुद्दाहरु छन्, तीनलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरिसक्यो । हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?
बहुसंख्यकले स्वीकार गरेको संविधान हो त्यो । २५ सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन् । तर हामीले संविधानको स्वागत गर्नु त परै जावोस् नेपालको संविधानलाई ‘ए कन्स्टिच्युसन’ भनेर अबमूल्यन गर्‍यौं, नकि ‘द कन्स्टिच्युसन’भनेर संबिधानका रुपमा मान्याता दियौं । यो कुनै शब्दको खेलमात्र हैन ।
हिन्दु अधिराज्यलाई परिवर्तन गर्दै धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएकोमा हामीले बधाइ समेत दिएनौं, स्वागतको एउटा शब्द पनि उल्लेख गरेनौं । तर, चीनको बक्तब्य हेर्नुस् त । उसले नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढै बसेर नेपालीको मन जित्ने मौका पायो ।
म केही नेपालीहरुका टिप्पणीहरु सुनाउन चाहान्छु । जहाँ भनिएको छ कि नेपालको सिंगो जेनेरेशन भारत विरुद्धमा भएको छ, आफ्नो कुरा नसुनेकाले दिल्लीले नेपाली राजनीतिज्ञलाई पाठ सिकाउन खोजेको छ भन्ने नेपालीको धारणा बनेको छ । यही हो हाम्रो उपलब्धि ? के हामीप्रति नेपालीको यस्तो धारणा बनोस् भन्ने चाहान्छौं ?
एक वा आधा मात्र अवरोध छन् । अरुबाट किन नपठाउने ? हामीले नेपाल जाने अर्को बाटो भेट्टाउन सकेनौं ? एयर लिफ्ट गर्न सक्दैनौं ?
लाखौं बिद्यार्थीलाई भनिएको छ कि, उनीहरु स्कूल जान सक्दैनन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । लाखौं महिलाहरुलाई भनिएको छ कि, उनीहरु खोप लगाउन सक्दैनन्, इन्धन छैन, खाना छैन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । हामीले के उपलब्धि पाइरहेका छौं यस्तो खालको ब्यबहार गरेर ?
हेर्नुस्त तपाइलाई जति दु:ख परोस स्पेसमा रुनसक्नु हुन्न रे : कि लाग्ने हो उतै
नेपालमा अति मन परईयेकी इन्डियन पत्रकार र लेखिका Barkha Dutt
भीमार्जुनजी का गहन कुरा सुन्नेकी : भिडियो कुराकानी
खुशखबरी : अब अॅाफलाइन भी उपलब्ध होगा फेसबुक
India is not only worrying almost Panicked: Read Brain of BJP Yashwant Sinha
नेपालीलाई फोकसगरि २२ अक्टोबरमा १ दिने अाबासिय मेडिटेसन कार्यक्रमको आयोजना हुदै
नेपाल भारत समस्यामा भरतीय मीडिया नाबभारत टायेम भारतको गल्ति लुकाउन उद्धत
स्वामि अानन्द अरूणज्यूको भिडियो अन्तरबार्ता
नेपाली कांग्रेस तेह्रौँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका
Satsang Of Boddhisatva Swami Anand Arun at Texas USA
Never follow anyone else’s path, unless you’re in the woods and you’re lost
पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालासँग सेप्टम्बर २४ मा मिसिसागामा अन्तरक्रिया हुदै ।
नवौँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालका तीन अर्बपति सहभागि हुने
नक्कली चामल, मासु र अन्य खाद्य सामाग्रीको फर्मुला बनाउने नेपाली बैज्ञानिक – CHHA PRASNA